မေးရိုးနယ် - တန်ဇန်းနီးယားနယ်
ကနေဆောင်းပါး: ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်နယ်စက် | အချိန်: ဧပြီလ 3, 2013 | tag:ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်နယ်စက်	|
မေးရိုးနယ်, ရှန်ဟိုင်း XSM မေးရိုးနယ်, စက်မှုအကျိုးရှိသောပစ္စည်းကိရိယာများ, သတ္တုရိုင်းကြိတ်စက်ကိရိယာများ manufacturers.Ore သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်, ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်သတ္တုရိုင်းနယ်ပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ် ခါးပတ်ပေါ်ကို, တုန်ခါလမ်းခွဲအဆိုပါစေလွှတ်ပေါ်ကိုပစ္စည်းကိရိယာများသတ္တုရိုင်း မေးရိုးနယ်, သက်ရောက်မှုနယ်, ဟိုက်ဒရောလစ်နယ် တစ်ဦးကိုနှိမ်နင်းကုန်ကြမ်းသတ္တုရိုင်းသည်, တစ်ဦးတို့ကဒုတိယ သေးငယ်တဲ့ jawcrusher, တူနယ် တို့ကသတ္တုရိုင်းအလယ်တန်းကိုနှိမ်နင်းတတိယစိစစ် တုန်ခါမျက်နှာပြင် ဖြည့်ဆည်းသည့်သတ္တုရိုင်း၏စံသတ်မှတ်ချက်များအတွက်ပို့ဆောင်နေသည် ဘောလုံးကိုကြိတ်, ultrafine ကြိတ် တို့ကသတ္တုရိုင်းတတိယအဆင့်ကုသမှု သံလိုက်ထည့်ထား, flotationmineral စက် needs.Of သင်တန်းအမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်, ဒီရုံယေဘုယျသတ္တုရိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြစ်ပါသည်, ရှန်ဟိုင်း XSM သတ္တုရိုင်းသင့်ရဲ့ type ကိုအကောင်းဆုံးသင်သည်ကိုက်ညီသောသင်သည်ငါ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်အခြေခံပြီး, သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကကျနော်တို့ညာဘက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်နှိပ်ပါကြိုဆိုကြသည် မျဉ်းအိုင်ကွန်၏ဘေးထွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသငျသညျအသေးစိတျအဖြေ willgive ။
Xuanshi မေးရိုးနယ် are primarily used for reducing various kinds of stones and lump materials into medium-grained gravel. The materials to be crushed can be hard, medium-hard and soft minerals whose compressive strength should be not more than 320 MPa. Our jaw crushers adopt V-shape inlet, resulting in higher crushing efficiency. Currently, these products become the preferred primary crushing equipment in the production of stone. They are widely used in many industries, such as mining, metallurgy, building material, railway, water conservancy, chemicals, and so on.
1 ။ ပိုမိုမြင့်မားသောလျှော့ချရေးအချိုး, တိုးမြှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား, ချောထုတ်ကုန်များ၏ယူနီဖောင်းအရွယ်အစား, ကျယ်ပြန့် application ကိုအတိုင်းအတာ။
2 ။ ရိုးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံ, တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, အဆင်ပြေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။
3 ။ အစာကျွေးဆိပ်ကမ်းနှင့်ဥတုဆိပ်ကမ်းကိုနှစ်ဦးစလုံး, output ကိုထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူသောချိန်ညှိဖြစ်ကြသည်။
4 ။ စွမ်းအင်ထိရောက်မှု, အနိမ့်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်, ရှည်လျားဝန်ဆောင်မှုအသက်, Eco-friendly ။
အဆိုပါလူထူးလူဆန်းအဖိုးကြီးရိုးမေးရိုးကိုဆင်းတက်ရွှေ့နှင့်အောင် drive ကိုကိရိယာ၏အရေးယူမှုအောက်မှာလှည့်။ အဆိုပါပစ္စည်းများဖျစ်ညှစ်ခြင်းနှင့်ပွတ်တိုက်, တိုက်မှုများ၏ရွေ့လျားမှု၏ရလဒ်အဖြစ်သေးငယ်တဲ့အပိုင်းပိုင်းသို့ချိုးဖဲ့ကြ၏။ ထိုနောက်မှပစ္စည်းများရိနာစွဲဆိပ်ကမ်းကိုဆင်းနေကြတယ်။
(t / h) လျှပ်စစ်ပါဝါ
(KW) outline ရှုထောင်
မှတ်ချက်: ဒီသတ်မှတ်ချက်ပဲရည်ညွှန်းသည်, မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုမှဘာသာရပ်များမှာ မေးရိုးနယ်ထုတ်ကုန်။